ANKARAOBATO ANKADILALAMPOTSY : Nahitana fatim-behivavy iray tsy misy tanana sy tongotra
Vono olona nahatsiravina. Fatin’olona novonoina tamin’ny fomba feno habibiana no hita tao anaty lobolobo teny amin’ny kaominina Ankaraobato Ankadilalampotsy, Distrikan’Atsimondrano, omaly maraina. 13 février 2019
Vehivavy ity novonoina ity ka voaporofo fa tsy nisy tongotra intsony ary tsy tao avokoa ny taovany iray manontolo. Hatreto anefa dia tsy mbola fantatra mazava ireo olona nahavanon-doza. Toy ny razana kila forehitra sy efa potika ary voarasarasa no hitan’ny olona tamin’io toerana feno lobolobo io. Ireo mpilalao baolina maraina teny an-toerana sendra naka baolina teo no nahita izany voalohany. Vatana mangatsiaka efa simba no hita tao.
Tsy dia nisy hoditra sy nofo firy intsony ny ampahan’ny vatany fa taolana sisa, toy izany koa ny lohany, karandoha sisa. Niboridana io razana io ary hita tamin’izany fa potika tanteraka ihany koa ny fivaviany. Izany hoe toa noloarana ny taovan’io olona io satria tsy nahitana izany intsony ny vatany. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny teo anivon’ny fokontany sy ny mpitandro filaminana ary ny mpitsabo.
Raha ny fahitana ny razana dia tombanan’ireto farany ho efa mihoatra ny efatra andro tany ho any no namonoana io vehivavy io rehefa avy naolana. Tsy misy nahafantarana ny mombamomba azy teny amin’ny manodidina sy teny amin’ny tenany. Ireo mponina teny an-toerana ihany koa dia tsy nahatsikaritra olona hafahafa teny amin’ny manodidina.
Novonoina tany amin’ny toeran-kafa izy io, izay vao natsipy teny amin’ity toerana ity ny fatiny nony avy eo, araka ny loharanom-baovao. Raha ny eny anivon’ny fokontany dia tsy misy mahafantatra azy io. Misokatra ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana ny amin’ny fikarohana izay fianakaviany sy ny nahavanon-doza. Arahina akaiky ny tohin’ity vono olona mahatsiravina ity ankehitriny.